नेपालनाम्चाको नियमित स्तम्भ किताबमा हामीले केशव दाहालसँग उनको उपन्यास मोक्षभूमिलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गरेका छौं ।
नयाँ किताब मोक्षभूमिका लागि बधाई । तर, के साँच्चै तपाईको पुस्तक बधाई दिन लायक छ ?
लेखक कुनै अवलौकिक प्राणी होइन । लेखक न त ईश्वर हो, न त सर्वज्ञ । एउटा साधारण मान्छेले कुनै कुरा लेख्छ, गाँउछ, बजाउछ वा रचना गर्छ भने त्यो स्वभावतः अनेकौं कमजोरीसहितको रचना हो । मात्र कुरा के भने कमजोरीलाई तपाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? तपाई कसैको कमजोरीलाई उल्कापात ठान्नुहुन्छ कि स्वभाविक ? अन्यथा, कुनै पनि रचनालाई तपाई बधाई दिन चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसका लागि तपाईसँग प्रसस्त बहानाहरु हुन्छन् र गाली गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि प्रसस्तै ठाँउहरु हुन्छन् । बाँकी के गर्ने हो त्यो स्वयं तपाई वा पाठकको कुरा हो । यो सन्दर्भमा लेखकले भन्नुपर्ने र प्रतिकृया दिनुपर्ने केहि पनि हुँदैन ।
यो किताबमा के छ र यो विशेष छ ? अर्थात किन पढ्ने यो किताब ?
सुन्दरता पाठकको छनौटको कुरा हो । रस, रंग र रचनामा मान्छेका आफ्नै छनौटहरु हुन्छन् । जस्तो कसैलाई इतिहास मनपर्छ, कसैलाई प्रेमकथा, कसैलाई रहस्यहरुको तिलस्मी जादु मनपर्छ भने कसैलाई क्रान्ति वा विद्रोह । कसैलाई रातो मनपर्छ, कसैलाई हरियो । मलाई लाग्छ, मोक्षभूमि कम्तिमा खैरो रंगको निरस र निर्जीव उपन्यास हैन । यो हरियो, रसिलो र भरिलो छ । यो टर्रो छैन । मोक्षभूमि हाम्रो सभ्यताको कथा हो । कोही पाठक आफ्नै मोक्ष र मुक्तिको सपनासँग एकाकार हुन चाहन्छ भने मोक्षभूमि पढ्दा निरास हुनुपर्दैन ।
यो किताब जन्मनुको कुनै परिवेश, कारण र अर्थ के हो ?
जब म पुराना फोटोहरु, पुराना दरबार, पुराना घरका बनौट, मन्दिरका गजुर, टुंडाल र चोकहरु देख्छु मन बहकिएर इतिहासतिर बरालिन पुग्छ । सोच्न थाल्छु, आजभन्दा एक सय, पाँच सय वा हजार बर्ष अगाडि यो ठाँउ कस्तो थियो होला ? हाम्रा कथा, दन्त्य कथा र मिथहरुले मलाई सुदुर बिगततिर लैजान्छन् । आफ्नै पुर्खाहरुले भोगेको त्यो समयबारे सोच्न थाल्दा मन आनन्दित हुनपुग्छ । हिजो मान्छेले आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि गरेका लडाईहरु पनि मेरा लागि बडो गजवका कुरा हुन् । यी र यस्तै अनेक कुराहरुले मलाई मोक्षभूमि लेख्न प्रेरित गरेका थिए । यसको अर्थ के भने, यो पुस्तक लेखेर बिशेषतः मैले हाम्रो पुर्खाहरुप्रति सम्मान प्रकट गरेको हो । किनभने, उनीहरुले हामीलाई स्वतन्त्रताका लागि अनवरत संघर्ष गर्न सिकाएका थिए ।
प्रारम्भिक प्रतिकृया के कस्ता आइरहेका छन् ?
गजवका प्रतिकृयाहरु पाइरहेको छु । उत्साहित छु ।
यो किताबको नाम कसरी मोक्षभूमि रहन गयो ?
यो मुख्यतः मान्छेले आफ्नो अस्तित्व, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानका लागि गरेको संघर्षको कथा हो । कथामा निकै पुरानो समय र सन्दर्भ निर्माण गरिएको छ । त्यसैले, किताबको नाम अलिक शास्त्रिय पाराको होस् भन्ने मेरो चाहना थियो । म चाहन्थे नामले सम्पुर्ण स्वतन्त्रताको प्रतिनिधित्व पनि गरोस् । केहि नामहरुमा विचार गरेपछि अन्तमा यसको नाम मोक्षभूमि रहन गयो ।
यो किताबमार्फत तपाई खासमा के भन्दै हुनुहुन्छ ?
मैले भन्ने चाहेको कुरा के भने मान्छेका लागि उसको सम्पुर्ण स्वतन्त्रता र मोक्ष बहुमुल्य कुरा हो । हाम्रो सभ्यताले जात, लिंग, वर्ग र वर्णका जे जस्ता भेद र तगाराहरु निर्माण गरेको छ त्यसलाई भत्काउनुपर्छ र सम्पुर्ण स्वतन्त्रतासहितको मान्छे निर्माण गर्नुपर्छ । अनि मात्र हाम्रो सभ्याता सार्थक हुन्छ ।
प्रकाशित भईसकेपछि यो किताबमा के के छुटेछन् जस्तो लाग्यो ?
मान्छेको जीवनमा अनेक कुराहरु छुट्छन् । र, रचनाकर्ममा पनि अनेक कुराहरु छुटिनै रहन्छन् । त्यसैले यो किताबमा पनि धेरै कुरा छुटेका छन् । म त्यसलाई स्वभाविक ठान्दछु । अतः त्यसरी छुटेका कुराहरुलाई यहि किताबमा समेट्नुपथ्र्यो भन्ने मलाई लाग्दैन । यो मामलामा म अलिक सन्तोकी छु । मलाई लाग्छ, यसमा छुटेका कुरा अर्कोमा लेखौंला । फुटकर कथाहरुमा लेखौला । अथवा मैले छुटाएका कुरा भविश्यमा अर्को कसैले लेख्ला । हिजो कतिपय कुरा अरुले लेख्न छुटाए र आज म लेख्दैछु । आज मैले छुटाएका कुरा भोलि अरुले लेख्लान् । यो सिलसिला चलिरहन्छ । र, चलिरहनुपर्छ ।
अब अर्को के कस्तो किताब लेख्दै हुनुहुन्छ ?
मसँग अहिले लेख्नका लागि तीनवटा परियोजना छन् । पहिलोः केहि कथाहरु सोचेको छु । मुख्यतः हिमाली क्षेत्रका कथाहरु । दोश्रोः बुद्धधर्मसँग जोडिएका केहि रोचक मिथहरु छन्, जसमाथि अलिक लामो उपन्यास लेख्नेवारे अध्ययन गर्दैछु । त्यसैका लागि आजकल म बुद्धिजम् एण्ड हिमालयन स्टडिजको कक्षा पनि लिन्छु । तेश्रो, हाम्रो राजनीतिक इतिहास, ज्ञान र अभ्यासमाथि अलिक गहिरो विवेचना गर्ने मन छ । सन्दर्भ सामाग्रीहरुको अध्ययन गर्दैछु । तर के हुन्छ, र कहिले हुन्छ थाहा छैन ।
पछिल्लो समय प्रकाशित तपाईलाई मन परेका पाँच किताब सम्झनुहोस् ।
म प्रयासः पढ्नलाई इतिहास, दर्शन र राजनीति मनपराउँछु । साहित्यमा कथा र उपन्यास मेरो छनौट हो । त्यस्ता सबै कितावहरु मलाई मनपर्छ, जसले मान्छेको अस्तित्वलाई स्थापित गर्दछन् । म कलापुर्ण, उन्मुक्त र बन्धनरहित जीवनको पक्षपाती हुँ । मात्र पाँचवटा किताबमा मेरो छनौट अभिब्यक्त हुँदैन । कोराना संकटमा पनि किताबहरु प्रकाशित भएका छन् । अतः ती सबै मेरा लागि महत्वपुर्ण र सम्झनायोग्य छन् ।
पछिल्लो समय प्रकाशित कितबाहरुमध्ये तपाईंको किताबलाई कहाँनेर पाउनु हुन्छ ? नढाँटी भन्नु ।
‘मोक्षभूमि’ किताबहरुको समुन्द्रमा, किताबहरुको बीचमा, किताबहरुको लहरमा किताबहरुसँगै छ । किताबहरुको बीचमा यो कहिले छेउमा पुग्छ, कहिले बीचमा, कहिले दायाँतिर र कहिले बायाँतिर । जता पुगे पनि आफ्नो ‘मोक्षभूमि’ किताबहरुसँगै देख्न पाँउदा बडो आनन्द लाग्छ ।
कविताः आज शपथग्रहण छ